Dad markale lagu diley degmada Warsheekh ee G/Shabeellaha Dhexe - Awdinle Online
Dad markale lagu diley degmada Warsheekh ee G/Shabeellaha Dhexe
Labada maleeshiyo Beeleed ayaa dagaalkooda waxaa uu salka ku hayaa arrimo la xiriira dhul daaqsimeed, waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyooday dagaalka Nin lagu Magacaabi jiray shariif Xaseey dhabiil, halka mid kale uu ku dhaawacmay.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in labada maleeshiyo beelood dagaalkooda uu si iskiis ah u joogsaday, waxaana dadka ku nool tuulada Xawaale Odayaaal ay sheegeen inay cabsi soo wajahday.
Saacadaha soo socda ayuu sheegay in Maamulka degmada Warsheekh uu Ciidamo u diri doono degaanka lagu dagaalamay si xaalada degaanka loo dejiyo loona xaliyo wixii dhacay.
Sanadihii la soo dhaafay degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha dhexe waxaa kusoo batay Colaad beeleedyada, waxaana 8-dii Bishaan lagu dilay Hooyo & laba Carruur ah oo ay dhashay degaanka Xaluule oo kamid ah degaannada hoostaga degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Previous articleAl-Shabaab oo la wareegay degaan ku yaalla duleedka Magaalada Dhuusamareeb
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo xukun ku riday Nin ka tirsan Al-Shabaab